မဒမ်ကိုး: ဒီပခုံးနဲ့ ဒီလက်ရုံး
သားမရှိလို့ အားမရှိဘူးမထင်ပါနဲ့ အမေ
ဒီလက်ရုံးဒီပခုံး မှာ အားအင်တွေအပြည့်ရှိနေပါတယ်.
ဒီပခုံး ပေါ်မှာလေ အဖေနဲ့အမေကိုထမ်း
ခွန်အားတွေအပြည့်နဲ့မို့ ယုံကြည်လိုက်စမ်းပါ အမေရယ်
အားကိုးလိုက် စမ်းပါ့ အမေ ။
(ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။တနေ့က အိမ်ကိုဖုန်းဆက်တော့ အမေကပြောတယ်။ မိုးတွေအပြင်မှာ သည်းသည်းမဲမဲ ရွာနေတယ်တဲ့။အဘိုးရဲ့နာရေး ပြီးတဲ့အချိန်မှာ အားလုံးရှင်းလင်း ပြန်သွားကြလို့ အဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာကျန်ခဲ့တယ်။ကျနော်ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာ အဖေမရှိဘူး အပြင်သွားနေတယ်။မိုးတွေ သည်းသည်းမဲမဲ ရွာနေတဲ့အချိန် အမေ အထီးကျန်တယ်လို့ ခံစားနေရပါလိမ့်မယ်။ အမေကတစ်ယောက်တည်း .အားငယ်တဲ့အကြောင်းပြောလို့ ကျနော် အားမငယ်ပါနဲ့အမေ။ သမီး နေ့တိုင်းဖုန်းဆက်မှာပါလို့ အားပေးလိုက်မိတယ်။ ကျနော်တို့ စကားတွေ -တော်တော်များများ ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ စကားတွေတချို့ကို ကဗျာအဖြစ်နဲ့ ပြန်ဖော်ကြည့်လိုက်တာပါ ။ )
နေ့လည် ၁ နာရီ တိတိ
၅ ရက် ၇ လ ၂၀၁၂
ရွှေဒိုးအမေတော့မသိဘူးနော် အမက ရွှေဒိုးရေးတဲ့ကဗျာ
ကိုယ်တွေတောင်ဖတ်ရင်း အားတွေ ရှိလာတယ်။
ဒိုးကန်ရဲ့ သန်သန်မာမာ ပခုံးတွေ၊ လက်ရုန်းတွေတောင် မှန်းကြည့်လိုက်မိတယ် :)
မိဘကို စာနာနားလည်ပြီး စောင့်ရှောက်တဲ့ သားသမီးတွေဟာ အမြဲ သွားလေရာ ခလုတ်မိဆူးမငြိဘူးတဲ့..။
ညီမရေ ကဗျာဖတ်ရင်း ကျွဲရိုင်းသောက်စရာမလိုပဲ
မိဘကို သိတတ်နားလည်တဲ့ သမီးလေး အမြဲတမ်း ကျန်းမာချမ်းသာမှာပါ။ မိဘအားကိုးရမယ့် သမီးလေး တစ်ယောက်အဖြစ်လည်း ရှင်သန်ခွင့်ရပါစေ ညီမ..။
မိဘက သားသမီးကို အရွယ်ရောက် လူလားမြောက်အောင် ကျွေးမွေးမယ်လို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပေမယ့် သားသမီးက မိဘအတွက် အားတခု ထီးတလက် အဖြစ်ရှိနေပေးပါမယ်လို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တာ ဖတ်ရကြားရတာ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ.. ကြက်သီးမွေးညင်းထအောင် အမေ့ကိုယ်စား ၀မ်းသာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မမ... အားသစ်တွေနဲ့ ဆထက်တိုးလို့ ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ပါစေ မမရေ..
မိဘကိုကြည်.ရှု.စောင်.ရှောက်ခြင်းသည် ဘုရားတည်တာတဲ.ညလေးရဲ. မိဘကျေးဇူးတထူးသိတတ်သူသည် ဆင်းရဲသောလည်း ခနတာတဲ.။
ကဗျာလေးပါအစ်မ.။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်.။ ဖတ်ရတာတော်တော်ကျေနပ်သွားတယ်.။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မဒမ်... ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်လိုက်ရတော့ အရမ်းအားရှိသွားတယ်။ မဒမ်က ကံကောင်းပါတယ်၊ အဖေရော၊ အမေရော မိဘနှစ်ပါးစလုံးကို လုပ်ကျွေးဖို့ အခွင့်အရေး အပြည့်ရှိပါသေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီလို လုပ်ကျွေးရမယ်ဆိုတဲ့ အသိ ရှိတယ်၊ ဒီအသိနောက်မှာ လုပ်ကျွေးနိုင်တဲ့ စွမ်းအားရှိတယ်။ ဒီတော့ လုပ်ကျွေးခွင့်ဆိုတဲ့ အရာကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်တယ်။ မဒမ့်ကဗျာလေးဟာ အဓိပ္ပာယ်ပေါင်းများစွာနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်.... ဖတ်တဲ့လူပေါင်းများစွာကို အားဖြစ်စေတယ်။ အရမ်းကောင်းပါတယ် ခင်ဗျာ...
အမေ့ ကို အားပေးတဲ့ အကြောင်း ဖတ်ရတာ တော်တော်ကို နှစ်သက်မိမလို့ ... ကြည်နူးစိတ်နဲ့ ရေးမလို့ပါ ... တခါမှ မရေးဖူးသေးတော့ ... >> ရူပါလန်းသော blogger များသာ မန့်သွားတတ်ကြ၏ ...။ ဆိုတာနဲ့ တွန့်သွားတယ် ... >> မိဘအတွက် အားကိုးလောက်တဲ့ သားသမီး ဖြစ်ခွင့်ရတာ တကယ်ပဲ ကျေနပ်စရာ ကောင်းပါတယ် မဒမ်ကိုး ခင်ဗျာ ...။
ဒီလိုကဗျာမျိုး ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ ဘယ်မိဘကများ အားမရှိဘဲ နေပါ့မလဲ? ဒီပုခုံးနဲ့ ဒီလက်ရုံးတဲ့...၊ ‘သမီးတစ်ကောင်၊ နွားတစ်ထောင်’ ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးလေးကို အနှုတ်လက္ခဏာ သဘောထက် အခုလို ခွန်နဲ့အားနဲ့ တောင့်တင်း၊ သန်မာ တဲ့ဖက်ကနေ တွေးမိသွားပြီ၊း) မျက်စိထဲမှာတောင် ဖုန်လုံးကြီးတွေ အလိပ်လိုက် အလိပ်လိုက်နဲ့...။
သာဓု သာဓု သာဓု ညီမရေ
ကဗျာ မဟုတ်တဲ့ သမီး ၁ ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟသံလေး ကိုနားဆင်သွားတယ်နော် .... :)
ဟာတာတာ ကြီး ဖြစ်ကျန်ခဲ့တယ် ..
လိမ်မာလိုက်တဲ့ ငါ့သမီးလေး ဂျာရစ်လေး...း))
မရှိတော့တဲ့ အမေကိုတောင် သတိရသွားပြီ။ မဒိုးကန်လည်း မိဘအားကိုးရတဲ့ သမီးရတနာအဖြစ်နဲ့ ထာဝရရှင်ပါစေလို့...
လက်တလော ကိစ္စလေးတွေနဲ့ ယဉ်ကြည့်မိတော့ အတော့်ကိုကွာနေ၏......
ဒယ်အိုးလေး မိဘလုပ်ကျွေးပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ သမီးလေးဖြစ်ပါစေဗျာာာ
ဒီကဗျာလေးက မိဘတိုင်းရဲ့ ရင်အစုံနဲ့သားသမီးတိုင်းအတွက်ခွန်အားတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်
ဒီကဗျာဖတ်ပြီး အဖေနဲ့အမေ ဘယ်လောက်များ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်သွားမလဲလို့နော်။
အမယ် ငါ့ညီမက ဒီလိုလေးတွေလည်း ရသား..
Chatfuel အသုံးပြုပြီး fb messenger bot ပြုလုပ်နည်း အပိုင်း-၃